Khadiija Maxamed Diiriye: Guddoomiye Mursal waxba kama beddeli karo go’aanka lagu baabi’iyey Guddiga Maaliyadda – Kalfadhi
Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha, Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye, ayaa war ay soo dhigtay barteeda Feysbuugga ku sheegtay inuusan Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, waxba ka bedeli karin go’aankii Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka, Cabdiwali Muudey, uu ku kala diray Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka.
“Imaanshaha Guddoomiye Mursal waxba kama beddeli karto qoraalka uu ku saxiixan yahay Guddoomiye Kuxugeenka 1-aad ee Golaha Shacabka” ayey ku tiri qormada ay Xildhibaanad Khadiija soo dhigtay barteeda bulshada. Iyadoo u duceyneysa ayey Xildhibaanaddu ku tilmaantay Guddoomiye Muudey inuu yahay “Hogaamiyaha Aqlabiyadda Golaha Shacabka”.
Wasiiraddu ma raacin qormadeeda sababta uusan Guddoomiye Mursal waxba uga bedeli karin go’aanka lagu kala diray Guddiga Maaliyadda, balse waxaa qormadeeda ku jirta “Hogaamiyaha Aqlabiyadda Golaha Shacabka” oo ay ugu yeereyso Guddoomiye Muudey, taas oo aan la ogeen iney ula jeeddo sababta wax ka bedelid la’aanta go’aankaas ee Guddoomiye Mursal.
Sidoo kale, waxaa warkeeda laga fahmi karaa iney Wasiir Khadiijo ku qanacsan tahay go’aanka lagu kala diray Guddiga Maaliyadda, hase ahaatee iyadana si cad uma soo bandhigin iyo sababta ay ku taageereyso. Waxaase la rumeysan yahay iney muxaafad u tahay Xukumadda Soomaaliya, oo ay Guddiga la kala diray soo saareen War-bixin ka dhan ah, oo muujineysa iney dowladdu si aan sharci ahayn u maamushay Miisaaniyadda 2018-ka, waxaana gaashaanka ku dhuftay Wasiirka Maaliyadda.
Qormada Feysbuugga Wasiir Khadiija Maxamed Diiriye. Waxaa magac u ah Fillipin Cadde